Mafungiro ekutanga eiyo iPhone XI anotanga kubuda | IPhone nhau
Mafungiro ekutanga eiyo iPhone XI anotanga kubuda
Ngirozi Gonzalez | | iPhone X
Mishumo iri pamusoro chizvarwa chinotevera iPhone X iri kutsva. Kune vazhinji vaongorori vanofungidzira kuti ino terminal ine mazuva ayo akaverengwa maererano neyakagadzirwa sezvo kudiwa kwaigona kunge kwakadonha uye Apple inosarudza kuisa mari mukati gadzira yako inotevera terminal, chinganzi chii iPhone XI.
Mune ino pfungwa yakaburitswa tinoona terminal yakafanana neiyo iPhone X asi ne zvishoma notch uye yakaderedzwa bezels yepadivi izvo zvinogona kureva kuwedzera kudiki muOLED skrini. Uye zvakare, tinogona kuona kuti chizvarwa chitsva ichi chingave sei netray yekuisa maSIM maviri. Tinokuratidza mushure mekusvetuka.
iPhone XI: yakawanda skrini, iri nani tekinoroji asi yakafanana dhizaini
Pfungwa pamusoro peiyo Apple inotevera iPhone ingaratidzika seiri kutanga kubuda, kunyangwe nekukurumidza. Iyo chizvarwa chechipiri yeiyo terminal X inogona kudaidzwa iPhone XI, kana zvirinani ndiwo musoro wacho iDrop Nhau pfungwa yako. Kunyangwe pachine nzira refu yekuenda kunoona zvishandiso nyowani, runyerekupe nemishumo yakaburitswa nemakambani ekuongorora inoratidza chii chingave chimiro cheApple.
Mune ino pfungwa iwe unogona kuona notch rutapudzo Nekuti iyo yakaoma Yechokwadi Kudzika kamera yakaderedza nzvimbo yayo iyo inobvumidza kuve nenzvimbo yakawanda yeiyo OLED pani. Uye zvakare, kuwedzera kweizvi hakungori chete kubva mukudzikiswa kwechinyorwa chengano, asi zvakare kunowedzera nekuve yakaderedzwa mudziyo wedivi bezels.
Ivo zvakare vanotaura nezve mukana wekubatanidza Kubata ID zvakare kunyangwe zviri pachokwadi Ndinofunga hatichazomuonazve mune anotevera Apple zvishandiso mushure mekusimbisa kuti yakanaka system yekuchengetedza. Uye zvakare, zvakakosha kuti urangarire kuti mishumo yazvino inoratidza kuti tinogona kuona matatu matsva matsva pakupera kwegore:
5,8-inch iPhone ine OLED skrini
6,5-inch iPhone ine OLED skrini
6.1-inch iPhone ine LCD skrini
iPhone SE kana yakafanana neyakagadzirwa yakafanana neazvino iPhone X
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Mafungiro ekutanga eiyo iPhone XI anotanga kubuda
kuderedza? chavanofanirwa kuita kubvisa icho.
Apple inosanganisira Meseji muICloud muIOS 11.3
Apple inoti Siri inoshandiswa zuva nezuva pane anopfuura mamirioni mazana mashanu emidziyo